UMkhosi Wokuvuna umgubho womusa ovela ezikhathini zobuqaba | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukunikela ukubonga isivuno
Umkhosi wokuvuna uwukugubha kwe I-gracias isabalale emhlabeni wonke. Imvelaphi yayo isukela esikhathini lapho umuntu wahlala phansi futhi ngaqala ukuqhuba ezolimo. Ngalo, wabonga onkulunkulu bakhe ngokuthi umhlaba umnike ukudla.
Ubudlelwano bokutshela phakathi koMuntu nezithelo zeMvelo butholakele ku ingqikithi yezinhlobo zethu futhi kudlula ukuqoqwa kwalezo zinkokhelo ezivela ezweni kanye nokudla abasinikeza kona ukuthola ubukhulu benkolo noma okungenani imfihlakalo.
1 Umlando omfushane womkhosi wokuvuna
2 Umkhosi wokuvuna, umgubho wokubonga emhlabeni wonke
2.1 Usuku Lokubonga
2.2 I-Erntedank, umkhosi wokuvuna waseJalimane
2.3 I-sukkot yamaJuda
2.4 I-Chinese Mid-Autumn Festival
Umlando omfushane womkhosi wokuvuna
AbaseGibhithe lasendulo babonga Osiris ngokuvunwa okuhle kwamagilebhisi, ngokuqoshwa kwesikhathi. Isiko lithuthele ku- Greece, lapho amaqembu ayehlelwe khona ukuhlonipha i- UDionysus futhi kamuva ku amaRom, lapho kuthiwa unkulunkulu wabizwa khona I-Baco. Eqinisweni, amaLatinos nawo ayegubha eminye imikhosi yokuvuna efana ne- Izinhlamvu, ukubonga Ceres okusanhlamvu enikunikezile.
Ngesikhathi Iminyaka ephakathi lelo siko laqhubeka lisenziwa phakathi kwabalimi. Kodwa-ke, ilahlekelwe yingxenye yokusebenza kwayo. Isizathu ukuthi izinkambu eziningi zezolimo zazitshalwa ezindlini zezindela futhi abefundisi, njengoba uzokuqonda, babenganikwanga kakhulu izinkulumo ezinhle zokudlala, yize babonga ubunkulunkulu izithelo ezitholakele.
Noma kunjalo, isiko lahlala. Ngisho nokufika kwe- Ukuzalwa kabusha kanye nalo ukubaluleka kwaqina kakhulu. Futhi ayikaze iyeke ukubungazwa kulowo nalowo kubantu bezwe kuze kube namuhla. Uma uvakashela noma yimuphi umzana ngesikhathi sokuvuna, uzobona ukuthi bawugubha kanjani lowo mzuzu ngesitayela ukubonga imikhiqizo etholakele.
Umkhosi Wokusanhlamvu eCzech Republic
Umkhosi wokuvuna, umgubho wokubonga emhlabeni wonke
Eqinisweni, eminye yemikhosi ebaluleke kakhulu egujwa ezizweni ezahlukahlukene zeplanethi yethu inomsuka wayo ku- umkhosi wokuvuna. Isibonelo ku I-Iran kuyagujwa mehgan, umkhosi osukela ezikhathini zasendulo UMbuso WasePheresiya futhi lokho kugubha kokubili ukufika kwekwindla nokuvuna.
Ngokwengxenye yayo, kufayela le- India banemikhosi efana UMakara Sankranti ukubonga okwamukelwe ngomhlaba. Kepha imikhosi ethandwa kakhulu enemvelaphi yayo kuleyo yokuvuna yiyo esizokuchazela yona futhi, nakanjani, uzojwayela yona.
Kungenye yamaholide esizwe e United States, Canada futhi nakwezinye Iziqhingi zaseCaribbean. Yize zonke izazi zivuma ukuthi imvelaphi yayo umkhosi wokuvuna, akucaci ngesiqalo saso sangempela. Abanye bathi ithathwe emikhosini ebihlelwe abaseSpain njengamanje Florida ngenxa yalesi sizathu, ngenkathi abanye beveza ukuthi yaqalwa ngabahlali abangamaNgisi ngekhulu leshumi nesikhombisa.
Kunoma ikuphi, njengoba kungenzeka usuvele uyazi, ngoLwesine lwesine ngoNovemba imindeni yalawo mazwe ihlangana izungeze itafula ukujabulela i- i-turkey egxishiwe futhi eyosiwe ngesikhathi sedina kuhambisana nophaya wethanga. E-United States kuyiholide kanye nochungechunge lwezitolo Macy sika hlela i Umbukiso omkhulu emigwaqweni yaseManhattan. Futhi, ngosuku olulandelayo, abaseMelika baqala inkathi yokuthenga ngoKhisimusi. Ingabe yena Ulwesihlanu olumnyama.
Erntedank, umkhosi wokuvuna waseJalimane
Ngokusho kwe-folklorist U-Alois Döring, Ukubonga kweJalimane noma Erntedank Inomsuka wayo osondele kakhulu kusiko lobuKristu lokwazisa ngezitshalo. Kodwa-ke, ezikude zazizosiyisa eRome naseGrisi efanayo, esasikutshela yona.
EJalimane amasonto ahlotshiswe ngemifino, izithelo, okusanhlamvu neminye imikhiqizo etholakala ezweni, kanye nokudla okulungiselelwe ngayo, isibonelo, isinkwa noma uju. Futhi izimakethe nazo zihlelelwe ukuzuzisa labo abaswele.
Kwenzeka ngeSonto lokugcina likaSepthemba noma ngolokuqala luka-Okthoba futhi amaJalimane nawo ahlangana njengomndeni ukuwugubha. Imenyu abayijabulelayo ingafaka futhi i-turkey noma enye inyama. Kepha into ejwayelekile ukuthatha, ngokunembile, i- isitshulu se Erntedank, isitshulu esinenhliziyo esinamabhontshisi aluhlaza, amazambane, i-kale, i-leek, isanqante, u-anyanisi nengulube. Futhi ukuyiphelezela, isinkwa sikakolweni kanye ukhilimu wethanga nama-chestnut.
El sukkot AmaJuda
Ama-Israyeli nawo anomkhosi wawo wokuvuna. Ingabe yena I-Sukkot futhi kwenziwa futhi ukukhumbula izehlakalo zabantu bakwa-Israyeli ohambweni lwabo lweBhayibheli badabula ehlane ngemuva kokweqa eGibhithe. Kwenzeka phakathi kukaSepthemba 15 no-22 futhi kwaziwa nangokuthi Idili lamaTabernakele noma lamaCabins ngoba ekuqaleni, kwakukhunjulwa ngokuchitha izinsuku ezimbalwa ku- sukka noma indawo yokuhlala yesikhashana.
Kulokhu, ngaphezu kokudla, imikhiqizo iyabusiswa. Ingabe ucingo isibusiso sezinhlobo ezine, okubandakanya isundu, umbomvana, ezisawolintshi nomnyezane. Konke lokhu ukukhumbula omunye wemikhosi eyinhloko yobuJuda.
I-Chinese Mid-Autumn Festival
Ungomunye wemikhosi ebaluleke kakhulu yokuvuna emhlabeni ngoba ngaphezu kwamaShayina, ibungazwa futhi isi-japanese, bakubiza kanjani Tsukimi; i isiKorea, ngubani oyibizayo UChuseok, futhi i-vietnamese. Kepha kubaluleke kakhulu kwelokuqala kulawa mazwe, kuze kube seqophelweni lokuthi kungathathwa njengomkhosi wawo ofanele kakhulu ngemuva koNyaka Omusha.
Kwenzeka ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yesishiyagalombili yekhalenda likaHan, okwethu okuyinyanga kaSepthemba. Kuyaziwa nangokuthi i- Umkhosi wenyanga ngoba ababusi basendulo babekhonza inkanyezi ukubonga izivuno. Empeleni, nanamuhla imindeni iyahlangana ukuzindla ngenyanga futhi ilungiselele lokho okuthiwa ikhekhe lenyanga. Ngaphezu kwalokho, imibhikisho neminye imisebenzi yenzeka.
Sengiphetha, umkhosi wokuvuna, a ngiyabonga lokho kuvela ezikhathini zobuqaba, kuyaqhubeka ukuba nakho ngokugcwele namuhla, kungaba ukubonga ngezinto ezitholwe ezweni, noma njengefa lomkhosi kokhokho bethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Umkhosi Wokuvuna umgubho womusa ovela ezikhathini zobuqaba